नेकपा संसदीय दलको कार्यालय किन छुट्टाछुट्टै ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेकपा संसदीय दलको कार्यालय किन छुट्टाछुट्टै ?
काठमाडौँ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको आठ महिना पूरा भइसक्दासमेत संसदीय दलको कार्यलय भने अहिले पनि छुट्टाछुट्टै स्थानमा छन्। सिंहदरबार भित्र रहेका दुवै कार्यलयमा संसद सचिवालयले अहिले पनि कर्मचारी खटाइरहेको छ। त्यतिमात्रै होइन, तत्कालीन एमाले संसदीय दलको कार्यलयमा प्राय तत्कालीन माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) का सांसद कमै जान्छन् भने तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यकलयमा पूर्व एमाले (हाल नेकपा) का सांसद पनि कम जाने गरेका छन्।
प्रमुख सचेतका हैसीयतले देव गुरुङ तत्कालीन एमाले संसदीय दलको कार्यलयमा गइरहने सांसद हुन्। अन्य सांसद भने काम नपरी एक अर्काको संसदीय दलको कार्यलयमा जाने गरेका छैनन्। ‘यसमा अन्य कुनै कारण भएर हामी उता (तत्कालीन एमाले) संसदीय दलको कार्यालयमा नभएका होइनौं,’ एक पूर्व माओवादी (हाल नेकपा) सांसदले भने, ‘पहिलादेखि नै यता आउने बानी परेका कारण सिंहदरबार छिरेपछि सिधै यता आइन्छ।’
एउटै दलको संसदीय दलको कार्यालय दुईतिर हुँदा कर्मचारी पनि त्यहीअनुसार व्यवस्थापन गरिएका थिए। नेकपाको बोर्ड लगाएर एउटै पार्टीका दुईतिर संसदीय दलको कार्यालय हुँदा काम गर्न समस्या हुने गरेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए। एक महिनाभित्र पूर्व एमालेको संसदीय दलमा नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
तर अब एक महिनाभित्र नेकपाको संसदीय दलको कार्यलय एकै ठाउँमा राख्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी गरिहेको छ। हाल अलग अलग रहेका कार्यलयलाई एकै ठाउँमा राख्न ठाउँको अभाव भएकोले त्यसकालागि केही समय लागेको सचिवालयको भनाइ छ।
नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ्ग र सचेतक शान्ता चौधरीको कार्यकक्ष पूर्व एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र राष्ट्रियसभाको दलका नेता दिनानाथ शर्माको कार्यकक्ष हालसम्म पूर्व माओवादीकै संसदीय दलको कार्यालयमा रहेको छ।
अहिले प्रमुख सचेतक गुरुङ, राष्ट्रियसभाको दलका नेता शर्माको कार्यकक्ष पूर्व एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा निर्माण भइरहेको छ।
हाल दुईटै संसदीय दलमा सात जना कर्मचारी कार्यरत छन् । पूर्व एमालेका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी १४८ जना सांसद् छन् । त्यसका लागि एकजना कम्प्युटर अधिकृत, एकजना कार्यालय सहायकसहित चारजना कर्मचारी कार्यरत छन् भने पूर्व माओवादीका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी ६५ जना सांसद् रहेका छन् ।
त्यसका लागि एकजना शाखा अधिकृतसहित तीनजना कर्मचारी त्यहाँ कार्यरत रहेका छन्।
नेकपाका २१३ जना संसद रहने गरी संसदीय दलको कार्यालय एकै ठाउँमा आएपछि छजना कर्मचारीको व्यवस्थापन गरे पुग्ने बताइएको छ ।